အသိတစ်လုံးအမြတ်ဆုံး၊ တစ်လုံးသိ အကျိုးရှိ၏ (၁)
Posted by ကိုမျိုး at 4:14 PM No comments: Links to this post
သာသနာ သက္ကရာဇ် ၈၈၈ ခုနှစ်တွင်၊ ပုဂံပြည်၌ သေလည်ကြောင် မင်းကြီး စိုးစံလျက်ရှိ၏။ ထိုအချိန်က တကောင်းမြို့ဟောင်း၌၊ ပန်းဘဲဆရာ မောင်တင့်တော်၏သား မောင်တင့်တယ်သည် ခွန်အားဗလ ကြီးမား၍အလွန်သန်စွမ်း၏။ အသက် ဆယ့်ခြောက်နှစ်သားအရွယ်ရောက်သောအခါ ဆင်ကို ချီမ၍ အစွယ်ကိုချိုးပစ်နိုင်၏။
ထိုအကြောင်းကို တကောင်းမင်းကြီး ကြားလေလျှင် မိမိ၏ထီးနန်းကို လုယူမည် စိုးရိမ်သော ကြောင့်ဖမ်း၍သတ်လေဟု အမိန့်ထုတ်လေ၏။ သေဘေးကို ကြောက်ရွံ့သော မောင်တင့်တယ်မှာကား တောတခုသို့ထွက်ပြေး၍ ပုန်းရှောင်နေရ၏။
မင်းကြီးလည်း မောင်တင့်တယ်ကို ဖမ်း၍မမိသမျှ စိတ်မအေးရသေးသဖြင့် ပရိယာယ် ဥာဏ်
ဆင်၍ မောင်တင့်တယ်၏ နှမ စောမယ်ယာခေါ် လှမြတ်စွာကို မိဖုရားမြောက်လိုက်လေ၏။ ထိုသို့မိဖုရား
မြောက်ပြီးမှ၊ သင်၏မောင်သည် ခွန်အားဗလကြီးမားသောကြောင့် ငါမြို့ဝန်ခန့်တော်မူလိုသည်။ အမြန်ဆင့်
မင်းကြီး၏မိန့်ဆိုချက်ကို စောမြတ်စွာက ယုံကြည်သဖြင့် မောင်ဖြစ်သူ မောင်တင့်တယ်ကို
အမြန် လာရောက်ရန် မိန့်မှာလိုက်သည်။
မောင်တင့်တယ်သည် မင်းကြီးက လည်ဆယ်ခေါ်ယူသည်ကို အကယ်ပင်ထင်မှတ်ယုံကြည်
သဖြင့် တကောင်းမြို့သို့ ပြန်လာလေသည်။ သို့သော် မင်းကြီးက သူ့ကိုမြို့ဝန်ခန့်မည့်အစား ချက်ခြင်း
ဖမ်းဆီးစေ၍။ စကားပင်တွင်ချည်နှောင်ပြီးလျှင် ဖိုကျင်ထိုးသတ်၍ အမိန့်ချမှတ်တော်မူထိုက်သည်။ ထိုအ
ကြောင်းကို နှမတော် လှမြတ်စွာကြားသိလေသော်၊ အမြန် ပြေးလာ၍ မီးပုံတွင်းသို့ ခုန်ချလိုက်လေသည်။
ထိုမောင်နှမ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် နတ်ဖြစ်၍ စကားပင်တွင်နေကြ၏။ စကားပင်၌ လူ-သူ-
ကျွဲ-နွား ချည် မိလျှင်သေသည်သာများလေ၏။ ထိုအကြောင်းကို မင်းကြီးကြားသိလေသော်၊ စကားပင်ကို
တူး၍ ဧရာဝတီမြစ်ထဲသို့ မြှောချလိုက်လေသည်။
ပုဂံသို့ရောက်သောအခါ စကားပင်ကို သေလည်ကြောင်မင်းကြီးက ဆယ်ယူ၍ နတ်မောင်
နှမရုပ် ထုလုပ်ပြီးလျှင် ပုပ္ပါးတောင်မှာ ထားလေ၏။ ထိုနတ်မောင်နှမကို အိမ်တွင်းမင်းမဟာဂီရိဟု ယခုထက်
ထိုအိမ်တွင်း မင်းမဟာဂီရိနတ်သည် ပုဂံပြည်တွင် စိုးစံခဲ့သော ရှင်ဘုရင်များနှင့် လူကဲ့သို့ပင်
ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံခဲ့၏။ ပုဂံပြည်မှ ရှင်ဘုရင်များကလည်း ထိုနတ်မောင်နှမကို အလေးဂရုပြုပြီးလျှင်။ နှစ်စဉ်
နတ်တော်လ၌ ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ နတ်ကန္နားပွဲပေး၍ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
( တိုင်းပြည်အုပ်စိုးသူသည် သူရဲကောင်းများကို မညှဉ်းဆဲ သင့်ပေ။ )
ယခုပဲခူးဟု ခေါ်သော ဟံသာဝတီနေရာသည် အလွန်ရှေးကျသော အခါကာလက ပင်လယ်ရေ
ပြင် ၀န်းရံလျင်ရှိခဲ့သည်။ နောက်များမကြာမီတွင် ကျွန်းငယ်ကလေး တစ်ကျွန်းပေါ်လာလေသည်။ ထိုကျွန်း
ငယ်မှာ အလွန်သေးငယ်၍ ဟင်္သာဖိုမ နှစ်ကောင် မနားလောက်သောကြောင့်။ ဟင်္သာဖို၏ ကျောထက်တွင်
ဟင်္သာမကနားရ၏။ ဤသို့ ဟင်္သာဖိုမနားသော ကျွန်းအရပ်ဖြစ်၍ ဟံသာဝတီဟုတွင်လေသည်။
ဤနေရာသည် မွန်တို့၏ နယ်မြေတွင်း ဖြစ်သော်လည်း အိန္ဒိယ တိုင်းသားကုလားများရောက်
လာ၍ ထိုကျွန်းကိုပိုင်ဆိုင်လိုသောကြောင့် သံတိုင်ကို စိုက်မှတ်ထားလိုက်လေသည်။
ထိုဟင်္သာဖိုမကား မြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်ထားခြင်းခံရသော သတ္တ၀ါများဖြစ်ကြသည်။ မြတ်စွာ
ဘုရား သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်အခါက အရှင်အာနန္ဒာနှင့် ဒေသစာရီကြွချီတော်မူလာစဉ် ထိုအရပ်သို့
ရောက်သောအခါ ဟင်္သာဖိုမက မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးပူဇော်သဖြင့်။ ဤသို့ ဗျာဒိတ်ထားတော်မူခဲ့သည်။
ဤဟင်္သာဖိုမ တို့သည် ငါ့အားပူဇော်ရသော အကျိုးအားကြောင့်။ ဤအရပ်ဒေသတွင် ဘုန်း
တန်ခိုးကြီးသောမင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤနေရာသည်လည်း အလွန်စည်ကားသော မင်းနေပြည်တော်ဖြစ်လိမ့်
မြတ်စွာဘုရား ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းပင် ထိုနေရာသည် ဟံသာဝတီမင်းနေပြည်တော်ဖြစ်၍
ယခုထက်တိုင် ပဲခူးမြို့ဟု ထင်ရှားနေပေသည်။
သထုံဘုရင်၏ သားတော်များဖြစ်သော သမလနှင့်ဝိမလ ညီနောင်နှစ်ပါးတို့သည် အသက်
၁၇ နှစ်ခန့်၌ မြို့နန်းအသစ် တည်ထောင်ရန် လှည့်လည်ရှာဖွေကြသောအခါ ထို ဟံသာဝတီကျွန်းကိုတွေ့
လေ၏။ သို့သော်သံတိုင် စိုက်ထား သော ကုလားတို့က သူတို့ သံတိုင်စိုက်ထားသည်မှာ အနှစ် ၉၀ ခန့်
ရှိပြီဖြစ်သဖြင့်။ ၎င်းသို့သာ ထိုကျွန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထိုက်သည်ဟု ကာကွယ် ပြောဆိုလေ၏။ မွန်မင်းသားတို့
ကလည်း၊ ဤနေရာသည် မွန်တို့နယ်မြေဖြစ်သဖြင့် ငါတို့သာ ပိုင်ဆိုင်ထိုက်သည်ဟု အကြောင်းပြ ပြောဆို
ပြန်၏။ နောက်ဆုံးတွင် မွန်မင်းသားတို့က ဥာဏ်ကူ၍ ကုလားများမသိအောင် သံတိုင်အောက်က သံ
ကောက် ကိုးစင်းကို မြှုပ်ထားလိုက် ပြီးလျှင်။ မိမိတို့က အလျင် ဦးကြောင်းကို အခိုင်အမာ ပြောဆိုကြလေ၏။
ထိုသို့ ပြောသည်ကို ကုလားတို့က ယုံကြည်၍ တူးကြည့်ကြရာ ပြောသည့်အတိုင်း သံ
ကောက် ကိုးစင်းကိုတွေ့ရှိကြသောကြောင့် မွန်မင်းသားတို့က ကျွန်းကိုရရှိလေ၏။ ထိုအခါ မြို့နန်း အသစ်
တည်၍ နောင်တော် သမလမင်းက မင်းပြု၏။ ညီတော် ၀ိမလကို အိမ်ရှေ့စံ ပေးထား၏။
သမလ မင်းသည် ဖရုံစိုက်ပျိုး စားသောသူများ၏ သမီးဖြစ်သော မယ်ကပီထော် ဆိုသူကို
မိဖုရားမြောက်၏။ မယ်ကပီထော်သည အလွန်လှပသော ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံ၏။ ထိုမယ်ကပီထော်မှ
သားတော်တပါးဖွားမြင်၍ ၅ လ-၆ လခန့်ကြာသော် သမလမင်းနတ်ရွာစံ၍ညီတော်ဝိမလမင်းနန်းတက်၏။
၀ိမလမင်းသည် မရီးတော်ကိုပင် မိဖုရားမြောက်ပြန်၏။ သားတော်ကလေးကိုကား၊ ရန်သူဖြစ်မည် စိုး၍ နယ်
စွန် နယ်ဖျားသို့သွား၍ စွန့်ပစ်ရမည်ဟု မိန့်လေ၏။ ထိုအတိုင်း ပေါင်းလောင်းမြစ် အရှေ့ဘက်ရှိ ကွန်
အသားရွာ တလိုင်း ကရင်လူမျိုး မုဆိုးမ မိနန်းကလိုင်း၏ ကျွဲခြံဝ၌ ညအခါ ကလေးကိုစွန့်ပစ်ခဲ့လေ၏။
နံနက်စောစော ကျွဲတို့ကို လွှတ်ချိန်တွင် ကျွဲမကြီးတစ်ကောင်သည် အလျင်ထွက်၍ ခြံဝရှိ
ကလေးကိုခွ၍ ရပ်နေ၏။ ထိုအချင်းအရာကို ကျွဲရှင် မိနန်းကလိုင်းကတွေ့ရှိ၍ သားအမှတ်ဖြင့်မွေးစားထား
၏။ ဤသူငယ်ကြီးပြင်းလာသောအခါ ကျွဲ၊နွားများကို ထိမ်းကျောင်းရ၏။ ကျွဲတို့ကို ယုယညှာတာသဖြင့် ကျွဲ
တို့ကလည်း ခင်မင်ယဉ်ပါးလေသည်။ ထိုသူငယ်သည် ကျွဲ၊နွားများကိုထိမ်းကျောင်းနေရင်း ကြမ်းကြမ်းတမ်း
တမ်း ခုန်ပေါက် ကစားနေရ သောကြောင့် အလွန်သန်စွမ်းလေသည်။
၀ိမလမင်းနန်းစံ ၈ နှစ်တွင် အိန္ဒိယမှ ကုလားတို့အား အရပ် ၇ တောင်မြင့်သော လန်ဘား
ဆိုသူ ကုလားကြီးက ဗိုလ်ပြုလျက် သင်္ဘော ၇ စင်းဖြင့် လာရောက်ကြ ပြန်၏။ ထိုကုလားရန်ကို ဖြိုဖျက်ရန်
လူစွမ်းကောင်းကို လိုက်လံရှာဖွေရာ၊ မွန်မင်းသားကွန်အသားကို တွေ့ရှိသဖြင့် နန်းတော်သို့ ခေါ်ဆောင်
ကွန်အသားနှင့် ကုလားကြီး လန်ဘားတို့ နှစ်ယောက်ချင်း တိုက်ကြစေဟု သဘောတူသ
ဖြင့် ကုလာကြီးက သံချပ်အင်္ကျီဝတ်လျက်။ ငှက်ပျောရွက်ခန့်ရှိ ဓါးကြီးကိုထမ်းလာ၏။ မင်းသားကလည်း
ငှက်ပျောရွက်ခန့်ရှိ လှံနှစ်စင်းကို စွဲ၍ ထွက်လာ၏။
နှစ်ယောက် ရင်ဆိုင်မိ၍ တိုက်အံ့ဆဲဆဲတွင် မင်းသားက ဥာဏ်ကူ၍ “ ငါတို့ နှစ်ယောက်
ချင်းတိုက်ကြမည်ဟု ဂတိထားပါလျက် အဘယ်ကြောင့် နောက်လိုက် အကူအညီခေါ်ခဲ့သနည်း ” ဟုဆိုလိုက်
၏။ ကုလားကြီးက အကယ်ပင်ထင်မှတ်၍ “ ငါ့မှာအဖော်မပါ ပါတကား ” ဟုဆိုကာနောက်သို့ လှည့်ကြည့်
လိုက်၏။ ထိုသို့ ကြည့်သော ခဏ၌ မွန်မင်းသားက ကုလားကြီး၏ လည်မျိုကို လှံဖြင့်ထိုးလိုက်ရာ ကုလား
၀ိမလမင်းသည် ကုလားကြီး ကျဆုံးသည်ကို အားရတော်မူသဖြင့် တူတော်အား အိမ်ရှေ့စံ
ပေး၏။ ၀ိမလမင်း နတ်ရွာစံသော် အသားမင်းသား နန်းတက်၍ နန်းစံအနှစ် ၂၀ မျှမင်းပြုပြီး နတ်ရွာစံ၏။
( အသားမင်းသားကဲ့သို့ လူမျိုးခြား၏ ဘေးရန်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော သူရဲကောင်းများပေါ်ထွက်ပါစေ။ )
Posted by ကိုမျိုး at 3:59 PM No comments: Links to this post
• လင်မယား နှစ်ဦးစလုံး ယုတ်မာသော စိတ်သဘော အမူအကျင့် တူညီစွာ ရှိနေကြလျှင် သူသေချင်း အတူတူ နေခြင်း ဟူ၍ လည်းကောင်း။
• လင်က စိတ်သဘောထား ဆိုးသွမ်း ယုတ်မာ၍ မယားက စင်ကြယ်မွန်မြတ် သော သူတော်ကောင်းစိတ် ရှိနေလျှင် နတ်သမီး မယားသည် သူသေလင်နှင့် အတူ ပေါင်းသင်းနေခြင်း ဟူ၍ လည်းကောင်း။
• လင်သည် မြင့်မြတ်စင်ကြယ်သော စိတ်ထားအမူအကျင့် ရှိသည့် သူတော်ကောင်း ဖြစ်နေပြီး မယားက အကျင့် စာရိတ္တ သဘောထား၊ အမူအရာ ယုတ်မာနေလျှင် နတ်သားလင်သည် သူသေမယားနှင့် အတူ ပေါင်းသင်းနေခြင်း ဟူ၍လည်းကောင်း။
• လင်မယား နှစ်ဦးစလုံး သူတော်ကောင်း တွေဖြစ်နေလျှင် အကျိုးစီးပွား များပြားကုန်သည်။ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ချမ်းသာ နေထိုင်ရသည်။ ထိုသူတို့အား မနာလို ၀န်တိုသူများ အဖို့ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ဖြစ်စေသည် ဟူ၍ လည်းကောင်း ဟောကြားခဲ့သည်။
( ပထမသံဝါသသုတ်၊ ဒုတိယသံဝါသသုတ် ဒေသနာတော် )
• သတ္တ၀ါတို့၏ နားသည် သမုဒ္ဒရာ မည်ပေသည်။ ထို နားသမုဒ္ဒရာ၌ အသံသဒ္ဒါရုံ တည်းဟသော အဟုန်အရှိန် ရှိသည်။ အကြင်သူသည် ထို အသံတည်းဟူသော အဟုန်အရှိန်ကို သည်းခံနိုင်ငြားအံ့၊ ထိုသူသည် နားသမုဒ္ဒရာ ကို ကူးမြောက်ပြီးသူ ဖြစ်ပေသည်။ လှိုင်းဘေး၊ ၀ဲကယက်ဘေး၊ ရေသတ္တ၀ါကြီးများ၏ ဘေးတို့ကို ကျော်လွန်ပြီး သူဖြစ်သည်။ ကမ်းတစ်ဖက်သို့ ရောက်ရှိပြီးသူ ရဟန္တာ ဖြစ်သည်။
• သတ္တ၀ါတို့၏ နှာခေါင်းသည် သမုဒ္ဒရာမည် ပေသည်။ ထိုနှာခေါင်း သမုဒ္ဒရာ၌ အနံ့ ဂန္ဓာရုံတည်း ဟူသော အဟုန်အရှိန် ရှိသည်။ အကြင်သူသည် ထို အနံ့တည်းဟူသော အဟုန်အရှိန်ကို သည်းခံနိုင်ငြားအံ့၊ ထိုသူသည် နှာခေါင်းသမုဒ္ဒရာ ကို ကူးမြောက်ပြီးသူ ဖြစ်ပေသည်။ လှိုင်းဘေး၊ ၀ဲကယက်ဘေး၊ ရေသတ္တ၀ါကြီးများ၏ ဘေးတို့ကို ကျော်လွန်ပြီး သူဖြစ်သည်။ ကမ်းတစ်ဖက်သို့ ရောက်ရှိပြီးသူ ရဟန္တာ ဖြစ်သည်။
• သတ္တ၀ါတို့၏ လျှာသည် သမုဒ္ဒရာမည် ပေသည်။ ထိုလျှာ သမုဒ္ဒရာ၌ အရသာ ရသာရုံတည်း ဟူသော အဟုန်အရှိန် ရှိသည်။ အကြင်သူသည် ထို အရသာတည်းဟူသော အဟုန်အရှိန်ကို သည်းခံနိုင်ငြားအံ့၊ ထိုသူသည် လျှာသမုဒ္ဒရာ ကို ကူးမြောက်ပြီးသူ ဖြစ်ပေသည်။ လှိုင်းဘေး၊ ၀ဲကယက်ဘေး၊ ရေသတ္တ၀ါကြီးများ၏ ဘေးတို့ကို ကျော်လွန်ပြီး သူဖြစ်သည်။ ကမ်းတစ်ဖက်သို့ ရောက်ရှိပြီးသူ ရဟန္တာ ဖြစ်သည်။
• သတ္တ၀ါတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာသည် သမုဒ္ဒရာမည် ပေသည်။ ထိုကိုယ် သမုဒ္ဒရာ၌ အတွေ့အထိ ဖောဋ္ဌဗ္ဗရုံတည်း ဟူသော အဟုန်အရှိန် ရှိသည်။ အကြင်သူသည် ထို အတွေ့အထိ တည်းဟူသော အဟုန်အရှိန်ကို သည်းခံနိုင်ငြားအံ့၊ ထိုသူသည် ကိုယ်သမုဒ္ဒရာ ကို ကူးမြောက်ပြီးသူ ဖြစ်ပေသည်။ လှိုင်းဘေး၊ ၀ဲကယက်ဘေး၊ ရေသတ္တ၀ါကြီးများ၏ ဘေးတို့ကို ကျော်လွန်ပြီး သူဖြစ်သည်။ ကမ်းတစ်ဖက်သို့ ရောက်ရှိပြီးသူ ရဟန္တာ ဖြစ်သည်။
• သတ္တ၀ါတို့၏ စိတ်သည် သမုဒ္ဒရာမည် ပေသည်။ ထို စိတ်သမုဒ္ဒရာ၌ သဘောတရား ဓမ္မာရုံတည်း ဟူသော အဟုန်အရှိန် ရှိသည်။ အကြင်သူသည် ထို သဘောတရား တည်းဟူသော အဟုန်အရှိန်ကို သည်းခံနိုင်ငြားအံ့၊ ထိုသူသည် စိတ်သမုဒ္ဒရာ ကို ကူးမြောက်ပြီးသူ ဖြစ်ပေသည်။ လှိုင်းဘေး၊ ၀ဲကယက်ဘေး၊ ရေသတ္တ၀ါကြီးများ၏ ဘေးတို့ကို ကျော်လွန်ပြီး သူဖြစ်သည်။ ကမ်းတစ်ဖက်သို့ ရောက်ရှိပြီးသူ ရဟန္တာ ဖြစ်သည်။
(သဠာယတန၀ဂ္ဂ၊ သဠာယတနသံယုတ်၊ သမုဒ္ဒ၀ဂ်၊ သမုဒ္ဒသုတ် )
• မှန်ကန်သော ဥာဏ်အမြော်အမြင်
• မှန်ကန်သော အကြံအစည်
• မှန်ကန်သော ပြောဆိုမှု
• မှန်ကန်သော ပြုလုပ်မှု
• မှန်ကန်သော အသက်မွေးမှု
• မှန်ကန်သော အားထုတ်ခြင်း လုံ့လ
• မှန်ကန်သော အောက်မေ့ခြင်း
• မှန်ကန်သော တည်ကြည်ခြင်း
(မူလပဏ္ဏာသပါဠိတော်၊ သီဟနာဒ၀ဂ်၊ ၀ိတက္ကသဏ္ဍာနသုတ် )
• မှားသော အမြင်
• မှားသော အကြံအစည်
• မှားသော စကား
• မှားသော ပြုလုပ်မှု
• မှားသော အသက်မွေးမှု
• မှားသော အားထုတ်ခြင်း လုံ့လ
• မှားသော အောက်မေ့ခြင်း
• မှားသော တည်ကြည်ခြင်း
• ကာလင်္ကတောဘန္တေ၊ မုဋသိဝရာဇာ၊ ဣဒါနိဒေ၀ါနံပိယတိဿ၊ မဟာရာဇာ ရဇ္ဇံကာရေတိ။
• သမ္မာ သမ္ဗုဒ္ဓေနစ တုမှေ ဗျာကတာ၊ အနာကတေ မဟိန္ဒောနာမ ဘိက္ခု၊ တဗ္ဗပဏ္ဏိဒီပံ ပသာဒေဿတီတိ။
• "ဘုန်းတော် ကြီးတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၊ အရှင်မြတ်ဘုရားတို့သည် တရားဓမ္မကို ဟောကြား တော်မူ ကြပါကုန်လေ ... "
• အရှင်မြတ်ဘုရားတို့၏ အာဏာတော်ဖြင့် အမ္ဗဋ္ဌ မလိုက်နာသည်ရှိသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤ အမ္ဗဋ္ဌကို လိုက်နာစေပါကုန်အံ့ ...
• အရှင်မြတ်ဘုရား တို့ဘက်က ဓမ္မစက် ဖြစ်ပါစေ။ တပည့်တော်တို့ဘက်က အာဏာစက် ဖြစ်ပါစေမည် ဟု ပဋိညာဉ် ၀န်ခံချက် ပြုခဲ့လေပြီ။
Posted by ကိုမျိုး at 7:09 PM No comments: Links to this post
ကမ္ဘာ့စကားပုံထဲက မိန်းမသား (၅)
Ugly wives and stupid maids are priceless treasures.
ရုပ်ဆိုးသော ဇနီးများနှင့် ထုံအသော မိန်းမပျိုများသည်
အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ရတနာများ ဖြစ်ကြသည်။
Women can appreciate what is immediately before their eyes.
မိန်းမတွေဟာ သူတို့ မျက်စိရှေ့မှာ ရှိနေတဲ့အရာကို ချက်ချင်းအကဲဖြတ်နိုင်တယ်။
Women commendamodest man, but like him not.
မိန်းမများသည် ရှက်တတ်သည့် ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချီးမွမ်းသော်လည်း ထိုသူမျိုးကို မနှစ်သက်ကြပါ။
The homely woman is precious in the home, but atafeast the beautiful one is preferred.
ရွက်ကြမ်းရေကျို မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ အိမ်မှာအဖိုးတန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပွဲလမ်းသဘင်မှာတော့
လှလှပပ မိန်းမကိုပဲ သဘောကျကြတယ်။
In books there are women who appear as jewels.
မိန်းမများသည် ရတနာများအဖြစ် စာအုပ်တွေထဲမှာသာ ပါသည်။
Evenabig elephant is caught byawoman's hair.
ဆင်ပြောင်ကြီးတစ်ကောင်သည်ပင်လျှင် မိန်းမတစ်ယောက်၏ ဆံခြည်မျှင်ဖြင့် ဖမ်းနိုင်သည်။
She who is the wife of one man cannot eat the rice of two.
လူတစ်ယောက်၏ ဇနီးသည် လူနှစ်ယောက်၏ ထမင်းကို မစားနိုင်။
Teach your son in the hall and your wife on th pillow.
သင်၏ သားကို အခန်းထဲမှာ သင်ကြားပါ။ သင်၏ဇနီးကိုတော့ ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ သင်ကြားပါ။
A gracious woman will cause more strife than twelve armed men can quell.
ချောမောလှပသည့် မိန်းမတစ်ယောက်သည် လက်နက်ကိုင်ယောက်ျား ဆယ့်နှစ်ယောက်၏
ရန်ပွဲထက် ပို၍ကြီးမားသည့် ရန်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်သည်။
The pretty girl in the house is the enemy of all the ugly ones.
အိမ်ထဲမှာ အလှဆုံးမိန်းကလေးသည် ကျန်သော ရုပ်ဆိုးသည့်
Women and wine lead men onabad road.
ယောက်ျားများကို လမ်းမှားပေါ်သို့ ပို့ပေးသည်။
A woman's sword is the her tongue and she does not let it rust.
မိန်းမတစ်ယောက်၏ ဓားသည် သူမ၏ လျှာဖြစ်၏။ သူမသည် ထိုဓားကို သံချေးတက်မခံပေ။
စကားပုံ သက်သက်သာဖြစ်သည် မည်သည်ကိုမျှ မရည်ရွယ်ပါ......................။
Posted by ကိုမျိုး at 8:08 PM No comments: Links to this post